Horudhac: Liverpool vs Chelsea… (Liverpool oo qarka u saaran ineyn lumiso rikoor taariikhdeeda baal dahab ah kaga jiro) – Gool FM
(Liverpool) 04 Maarso 2021. Chelsea ayaa shan maalmood gudahood la ciyaareysa labo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan horyaalka Premier League xilligan iyo taariikh ahaanba.
Blues oo Axaddii garoonkeeda barbarro goolal la’aan ah kula gashay Manchester United ayaa caawa booqaneysa naadiga Liverpool.
Inkastoo Reds ay maalmo adag ku bilaabatay sanadkan 2021, misena waa koox kale oo loo saadaalinayo inay kusoo laaban karto hannaankeedii wacnaa.
Liverpool ayaa dib u heleysa goolhayaheeda koowaad ee Alisson Becker kaasoo kulankii Sabtidii ku seegay tacisidii gashay qoyskiisa kaddib dhimashadii aabbihii.
Fabinho ayaa la rajeynayaa inuu kusoo laabto safka Reds ee ciyaartan diyaarka u ah kaddib soo kabshadiisa dhaawicii muruqa ahaa, halka Diogo Jota isaguna lagu soo dari doono haddii uu kasoo kabto xanuun qandho ah oo uu dareemayay sida la sheegay.
Chelsea ayaa qiimeyn doontaa xaaladda gooldhaliyaheeda ugu sarreeya xilli ciyaareedkan ee Tammy Abraham kaasoo dhaawac fudud uu kasoo gaaray canqowga intii uu ku jiray tababarkii Talaadada.
Callum Hudson-Odoi ayaa diyaar u ah kulankan walow uu qabo dhaawac bowdada ah, balse waxaa guud ahaan ciyaartan seegaya Thiago Silva.
Liverpool ayaa ka guuleysan karta Chelsea kulankii shanaad oo xiriir ah horyaalka markii ugu horreysay tan iyo intii u dhexeysay 1972 illaa 1974.
Chelsea ayaa kaliya hal guul gaartay 12-kii kulan ee ugu dambeysay labadan koox wada ciyaaraan horyaalka, iyagoo la garaacay lix jeer, halka shan kalena ay barbarro heshay.
Blues ayaa 23 guuldarro oo horyaalka ah kala kulantay Reds marka ay horyaalka la ciyaareyso, waana kooxda ay guuldarrooyinka ugu badan ee horyaalka kala kulantay.
Liverpool ayaa xambaarsan afar guuldarro oo xiriir ah oo kusoo gaaray garoonkeeda kulammada horyaalka, waxayna tiro ahaan guuldarrooyinkaas la eg yihiin guuldarrooyinkii kooxdan garoonkeeda kusoo gaaray 100-kii kulan ee ugu horreysay xukunka Jurgen Klopp.
Reds ayaa halis ugu jirta inay shan guuldarro oo xiriir ah Anfiel kusoo gaaraan markii ugu horreysay taariikhda.
Guushii ugu dambeysay ee ay garoonkeeda ku gaarto waxay timid 16-kii December 2020 ciyaar ay 2-1 kaga adkaatay Tottenham.
Kaliya Newcastle, Southampton iyo Sheffield United ayaa ka guuldarro badan Liverpool sanadkan 2021 waxaana kooxda horyaalka difaacaneysa soo gaaray lix guuldarro.
Jurgen Klopp ayaa guuldarro la’aan ah shantii kulan ee horyaalka Premier League oo uu garoonkiisa kula ciyaaray Chelsea, waxaana uu guul ka gaaray labo jeer, isagoo saddex jeer barbarro uu la galay.
Thomas Tuchel ayaa guuldarro la’aan sagaalkiisa kulan ee ugu horreeya isagoo ah tababaraha Chelsea dhammaan tartammada, waxaana uu guuleystay lix jeer halka saddexda kalena barbarro ay ku dhammaadeen.
Waxaa la iska dhaliyay 12 gool kulammada uu Tuchel hoggaaminayo Blues, waxaana kooxdiisa ay dhalisay 10 gool halka iyagana laga dhaliyay labo gool.
Kaliya Manchester City oo hoggaanka horyaalka heysa ayaa ka dhibco uruursi badan Chelsea tan iyo markii uu shaqadeeda la wareegay macallinka Jarmalka ah oo u gacanta u galiyay 15 dhibcood.
Balse Tuchel waa guul la’aan toddobo jeer oo uu marti u noqday Klopp oo ay wada dhalasho yihiin, waxa uu barbarro kasoo helay labo jeer halka shanta kalena lasoo garaacay.
Kaliya Antonio Rudiger, Callum Hudson-Odoi iyo Mateo Kovacic ayaa wada ciyaaray dhammaan sagaalka kulan ee uu Tuchel macallinka u yahay Chelsea.